Kukurukurirana Pakati peVokunze Kwevatambi Vanotamba Nenzvimbo | GFUN
Vana vakaita sechipo, vanofanirwa kunge vasiri-matoyi, dhizaini inonakidza inogona kuunza mufaro usingaperi kumwana. Midziyo yevatambi yevana Zvimwe zvinonakidza zvekudyidzana uye zvinonakidza zvekutamba zvevana zvinogona kuisa njodzi kuvana. Gore rega rega, vana vanodarika zviuru zana vanopinda mutsaona huru nekuda kwemidziyo yekutamba yevana uye vanofanirwa kuenda kuchipatara kunorapwa.
Naizvozvo, kana uchisarudza michina yekutamba yevana, zvinodikanwa kuti uongorore kwete chete zvekushandisa zvekutamba, asiwo mirairo yekurongedza. Midziyo yevatambi yevana inogona kumutsa kufarira kwevana pakudzidza kushandira pamwe nharaunda. Kunze kwekutamba michina kwakagadzirwa zvinoenderana nemamiriro ekunze ekunze.
Inonyatsogadzirisa zvakatipoteredza munzira dzakasiyana siyana, ichiisa hwaro hwekushingaira kwevana, kudzidza nekushandira uye kugadzirisa matambudziko. Kukura kwemwana kune zvakawanda zvine chekuita nharaunda yekugara. Kana mwana aine kutya, haugone kutaura zvinonzwika. Iwe unofanirwa kumutarisira uye kudzidza kushinga kwake pachinangwa. Panguva ino, iwe unogona kuenda naye kunotamba nevana zvigadzirwa zvekutamba. Nekuti uyu mutambo unokwana mutambo, kwete kungokudziridza kuwirirana kwevana uye maoko-pane kugona, asiwo kurega mwana ane hunyanzvi, ngaarege hake kutarisana nedambudziko iri ega. Ini ndinonyatso kurudzira asina stainless simbi masiraidhi kuti vana vatambe nawo. Anogona kutibatsira kuchengeta vana.
Izvo zvakare zvakaita kuti ndione kuti iyi yakakodzera kwazvo kumitambo yevana, kwete kungodzidzisa simba remuviri, asiwo mumoyo mangu makasimba. Vamwe vana vanozvarwa vakashinga, haufanirwe kutsidzira matarenda ake, unofanirwa kuvadzora nemazvo, uye unofanirwa kutora ruoko rwako nenzira kwayo. Kana vana vakadaro vachitamba, vanofarira kutamba makadhi vasina kujairika. Semuenzaniso, ivo vanofarira kudzokera kumashure. kukwira, sezvo kuchinetsa, kugutsa zvikuru kuda kwake kuziva. Mune ino kesi, kana inogona kuvimbiswa kuve yakachengeteka, ivo vakasununguka kutamba nezvimwe zvevana zvekutamba zvekushandisa, izvo zvinogona kuratidza kugona kwavo.